Rafitra mpampita entana manontolo, milina fanamasinana tarehy tokana - GOJON
Professional, marani-tsaina, kilasy ambony
GOJON dia miorina ao an-tanàna Qingdao, Sina, mazoto amin'ny fampivelarana ireo vokatra fototra toy ny rafitry ny mpampita entana amin'ny orinasa manontolo, tsipika Smart Laminating Single Facer, Rafitra fitantanana famokarana ded. Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tena tsara, tambajotra marketing tonga lafatra ary serivisy tena tsara, amidy amina firenena maro toa ny Alemanina, Italia, Espana, Gresy, Rosia, Belarus Japan, Thailand ary India sns ny vokatra azonay, ary nahazo fiderana avo an'ny mpanjifa.
Traikefa 13 taona
Vokatra mihoatra ny 20
LS Series mitsivalana haingam-pandeha avo lenta sy stacker
Famaritana ara-teknika - Ny taratasy ambony sy ny ravin-taratasy ambany dia mifamadika; - Takelaka ambony ho azy - takelaka ambany manamarina-mampifanaraka ny rafitra voafehy servo (patanty); - fehin-kibo hisintona ho an'ny fizotran'ny fitaterana manontolo; - Valizy fanaparitahana mitovy dika mitovy; - Sehatra manandratra ny fitaovana famahanana eo aloha; - Fitaovana mitazona multi-asa ho an'ny valizy samy hafa; - Rafitra fanodinana lakaoly; - Toro lalana indroa manosika ny fisoratana anarana; - Azo soratana ho azy tampoka / tanana taratasy ...
Laminator mandeha ho azy haingam-pandeha
Ny endri-javatra 1. Ny fanivanana ny ravina ambony dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny rafitra servo avo roa heny, manome mazava tsara, ary ny refy mandroso dia azo fehezina ho azy. 2. Ny takelaka ambony sy ny ravina ambany dia ampifanarahin'ny fisoratana anarana aloha mandritra ny fizotry ny dia, ity dingana tsy miato ity dia manome vokatra bebe kokoa. 3. Ny rafitra mekanika dia manome antoka ny fifindran'ny lamba ambony sy ny ravina ambany. 4. Ny lohan'ny mpamahana haingam-pandeha dia manome fahombiazana azo antoka sy azo antoka. 5. ...
Gluer fampirimana mandeha ho azy 1226
Famaritana 1. hafainganam-pandeha fehikibo farany ambony (m / min): 120 2. fahombiazan'ny asa faran'izay betsaka (pejy / min): 240 (miankina amin'ny toe-javatra misy) 3. ny tahan'ny herinaratra (kw): 20.2 (5-10KW eo ambanin'ny asa mahazatra ) 4. refy (L × W × H) (mm): 12640 × 4250 × 3000 (tsy ampidirina ny fizarana mamatotra) 5. lanja tanteraka (taonina): manodidina ny 13,5 6. baikoina fitadidiana (seta): 250 (azo lava) 7 . fomba fanaraha-maso: fanaraha-maso mandeha ho azy PLC 8. habe banga: Max. Haben'ny (mm): 1200 × 2600, min. habe (mm): 260 × 740; Ma ...
Gluer fampirimana mandeha ho azy 1228-S
Famaritana ara-teknika - fananganana mitambatra, ny singa tsirairay dia afaka miasa tsy miankina, azo ampifandraisina amin'ny milina fanontana izay ny perimeter dia 1000mm ~ 1200mm; - Misafidy haingana sy manova ny filaharana, miovaova kokoa ho an'ny filaharana amin'ny vola kely; - Ny refy mamokatra Minium dia 135mm * 135mm; - Volavola manokana ho an'ny valizy matevina sy lehibe kokoa; - Fananganana milamina sy azo antoka amin'ny famokarana betsaka; - Ny kojakoja rehetra mifandraika amin'izany dia avy amin'ny volo malaza eran-tany ...
Endri-javatra * Miasa miaraka amin'ny offset sy ny prepri ...
Endri-javatra * Sarimihetsika mihodina miova provi ...
Lamià mandeha haingana ...
Laminator haingam-pandeha haingam-pandeha * Ny max lamina ...
Cassette Single Facer * Trolley elektrika ...
Mpandefa Roller Drive
Tsy misy famaritana anarana 1 habe miankina amin'ny cu ...
Endri-javatra Ny fitambaran'ny fihodinan'ny co ...
Endri-javatra Ny fitambaran'ny rojo birao ...
Rafitra fitaterana taratasy mifono taratasy ...
Auto Module Belt Conve ...
Ny rafitra mpampita fiara dia afaka mihaona amin'ny hafa ...
Carte Conveyor, Erp Banking, Roller Conveyor Systems, Efijery fiasan'ny atrikasa, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, A3 Taratasy fampirimana,